Varotra asa tanana: Antananarivo no tsenan’ny fihariana be indrindra. | NewsMada
Varotra asa tanana: Antananarivo no tsenan’ny fihariana be indrindra.
Mpivarotra asa tanana : mpaninjara, mpamongady sady mpaninjara, mpanondrana mamaly ny filàna any ivelany sy mivarotra eto an-toerana ihany koa, izay manana renivola betsaka fampiasa amin’izany karazam-barotra izany. Ny hita eny an-tsena matetika ny vehivavy, maro anisa ny mpivarotra, izay sady mpanao asa tanana ihany. Misy ihany ny lehilahy mivarotra ny zava-bitany. Ny toerana ivarotana hofaina. Antananarivo, hatramin’izao, no tsenan’ny fihariana asa tanana be indrindra.
Efa fomba fivarotana izao ny varotra ataon’ireo mpamongady amin’ny mpaninjara, izay manao komandy ihany, araka izay filàny amin’ireo mpamongady ireo. Miankina amin’izay lanin’ny mpanjifa ny komandy atao. Misy manao isan-kerinandro na isam-bolana. Tena ahazoana tombony, hoy ireo mpivarotra, ny varotra amin’ireo mpizahatany vahiny mandalo. Fohy ny lalam-barotra, miala any amin’ny mpanao azy, raisin’ireo mpamongady, mankany amin’ny mpaninjara. Misy tapitra eo amin’ny mpamongady ihany ny varotra.
Samy manana ny andro tsenany ny tanàna tsirairay fa amin’ny ankapobeny, ao ireo tsena misokatra isan’andro. Tsy mitovy ny vokatra hita any amin’ireny tsena ireny na ny karazana akora ampiasana. Samy manana ny mampiavaka azy. Araka ny vanim-potoana koa ny vidiny, main-tany (marsa-oktobra), ambony vidy ny vokatra, tsy mitovy amin’ny fotoam-pahavaratra izay somary latsaka ny vidiny, vitsy ny mpividy. Ratsy ny lalana tsy afahan’ireo mpanangona entana mivezivezy firy.
Olana iray mahazo ireo mpamongady ireo ny fisian’ny mpanjifa sasany tsy mandoa vola. Amin’ny ankapobeny eo amin’ny varotra ivelany tsy maharaka ny fifaninanana amin’ny vokatra vita avy any Azia ny asa tanana malagasy.